Umhla My Pet » Lumkela Ukuba Professional Online Dater
ukubuyekezwa: Aug. 08 2020 | 3 min ukufunda
Qho ngonyaka, amakhulu amawaka abantu bafumane 'umdlalo wabo ogqibeleleyo’ ngeenkonzo ukuthandana online. Yaye nyaka ngamnye amakhulu amawaka batyhafe ngamava abo. Enye into eyabangela ukuba abo iingxaki ukuthandana online kukuvela le 'dater yobungcali online', binzana lakhiwe Dating Magazine umxokozelo ukuchaza umntu owenza nzulu malunga ukufumana umntu, kodwa ngaphandle ngenjongo yokuthatha nawuphi na umhla okanye ubudlelwane 'ngokugqithiseleyo’ ngokuba Umdlalo olandelayo 'inokuba bhetele.’
A online dater professional ngokuqhelekileyo anazo ezintathu okanye ngaphezulu imikhwa zilandelayo:
> Ukunxibelelana nabantu ngaphezu ezintandathu ngexesha elinye.
> Ilungu lweenkonzo ukuthandana intanethi ezintathu okanye ngaphezulu ngexesha elinye.
> Relists iprofayile ngaphakathi 24 iiyure yokwahlukana ubudlelwane.
> Ikuvumela unxibelelwano ezininzi nje 'kuphela’ ukuze ubeke ixesha zibe yonxibelelwano entsha.
> Uhlola imiyalezo kunye neenkonzo ukuthandana izihlandlo ezininzi ngosuku.
> Soloko ukholelwa ukuba Umdlalo olandelayo 'inokuba bhetele'.
> Amaxesha amaninzi ngonyaka kuya kuba umhla ngaphezu kwesinye, nabantu abohlukeneyo, wawamisa ngeveki.
> Kumqondiso yokuqala yembandezelo nolwalamano enokwenzeka, uyamyeka izinto uluqhawule ukuba babuyele ukuthandana online.
> Usenokuyifihla iprofayile, kodwa akuyicimi, xa ngokuthe ngcembe ndithandana nomntu omnye.
> Xa bebuya kumhla, nangoko nokutshekishwa imeyile imiyalezo emitsha kwabanye.
ngokubanzi, umntu abayiqondi ukuthi, 'Ndifuna ukuba ube dater yobungcali online’ sukela oko usukelo ubomi. Yinto oqalisa ngenxa yamava ukuthandana oluselayinini mntu. Yena / ibona ukuba 'kulula’ ngayo ukufumana umhla omtsha esaziswa ubuso ezintsha phantse yonke imihla. Ngaphambi kokuba umntu uyayazi loo nto, yena / yena unxibelelana kunye nesiqingatha elinesibini (okanye ngaphezulu) abantu ngaxeshanye. Xa mhla amalungiselelo nomntu omnye kusekho ithemba lokulinda ezintandathu kwi I-inbhoks umntu xa / ebuya ukusuka kumhla. le, ekujikeni, iqala ukuphuhlisa kwingcamango enjini ukuba umntu olandelayo kuba 'engcono,’ ngoko kulula ukushiya ubudlelwane okanye amava ukuthandana kumqondiso yokuqala yembandezelo kunokuba kusebenza ngalo ezo ngxaki.
A online dater oqeqeshiweyo ndiya kubusithelisa ngokubanzi yabucala kuthelekiswa zicinywe xa kungena unxulumano ukuthandana kuphela. zinganegalelo, umntu, akunikayo ngokwenene sakhe 100% ukuba ubudlelwane ngenxa yokuba qulunqa yokuphuma lula emva langa kwemihla.
daters Professional online, engaqondanga, niyifumene nefuthe elibi abantu ba dibana kunye ngexesha matutu zabo. Umzekelo, standardised online dater ngobuchule ukubhala abantu abasixhenxe ngexesha elinye, xa elinye ithemba elitsha umdla bonisa. Ekujikeni, online dater lobungcali anxibelelana omnye (okanye ngaphezulu) zabanye abantu abasixhenxe ukuba uyeke ngesiquphe, eshiya loo mntu ngaphandle iimpendulo ezibuza, 'Phi yena / yena shwaka ukuba?’ Yenye ingxaki daters zobungcali online bazise ukuthandana Intanethi ukungabi kwabo ukuzibophelela oyinyaniso. Basenokuba ezintathu, ubudlelwane abane okanye ngaphezulu konyaka. Ulwalamano ngokubanzi mfutshane-sadlula yaye online dater lobungcali uye umhla omtsha emgceni (nomntu sitsha / wadibana online) zingaphelanga iintsuku eziliqela yokwahlukana.
Umntu ekuye iimpawu ezintathu okanye ngaphezulu ngumntu dater professional kwikhompyutha akafuni kuvuma ukuba / u yi online dater yobungcali, kodwa ukwenza oko linyathelo ekusombululeni ingxaki kuqala. Amanye amanyathelo yokusombulula le ngxaki zezi:
> ukucima ngokupheleleyo iprofayile yakho(s) xa engena kubudlelwane. Akukho ekhangela kokusemva, kuphela phambili.
> Uyazibophelela ekuqhubekeni ulwalamano lwakho kunye nokuzimisela ngamandla ukuba ukusebenza ngapha iingxaki. Ukusebenza imiba kubudlelwane into enceda abantu ukuba bakhule. Ukusaba na isisombululo.
> Ukuba uyayeka ukunxibelelana nomntu, musa ukuyenza loo nto turkey ebandayo. Ungayithumela loo mntu inqaku sentlonelo kangangokuba / yena uyazi ukuba kutheni. Umntu uya kukuhlonela ngaphezulu le.
> Fumana enye inkonzo ukuthandana oluselayinini ungathanda kwaye kunamathela kuyo. Lo ngumdlalo ukubona ukuba bangaphi abatsha uyakwazi ukunxibelelana. Wonke umntu uthetha ungumntu wokwenene oneemvakalelo ngokwenene. Musa ebakhokela.
> ukunxibelelana kuphela inani elincinane labantu ngexesha.
> Musa kweyela kwiingqondo 'kwelandelayo kunokuba ngcono.’ kunokuba, ingqalelo kumntu wena yaye nazi ukuba 'bhetele'. Ngoko yenza isebenze.
daters Professional online ngokulahleka ukwenzakalisa abantu abaninzi ebudeni 'ebingalingi' yabo. Kodwa mhlawumbi yintoni ngakumbi kukuba daters professional online ubuhlungu ngokwazo ngenxa yokuba abazange bafunde ukusebenza ngokusebenzisa imiba ubudlelwane avelisa ixesha elide ngempumelelo ubudlelwane. ngethamsanqa, kunye nokuzimisela, daters yobungcali online banakho ukutshintsha kwaye xa bebeka kujoliswe kwinto enye efanayo olunzulu ulwalamano (njengokuba wenzayo ukuthandana online) ngoko ubudlelwane ngokubanzi uguquka amava emangalisayo kunye ixesha elide. Kwaye uvelisa elinye ibali impumelelo yabantu ababini wadibana online.